Ady amin’ny tsy fanjarian-tsakafo : tsy ampy ny vola hampihodinana ny toby PNNC | NewsMada
Ady amin’ny tsy fanjarian-tsakafo : tsy ampy ny vola hampihodinana ny toby PNNC
Mahatratra 6 000 ny toby PNNC misahana ny fanjarian-tsakafo eny anivon’ny fokontany maro manerana ny Nosy. Amin’izao fotoana izao, ny 50% sisa amin’ireo no mihodina manao ny asany noho ny tsy fahampian’ny vola. Nihena amin’ny ampahefany ny sorabola kirakiraina ampandehanana ny asa rehetra nefa fototry ny ady amin’ny tsy fanjarian-tsakafo ny fisian’ny toby PNNC, araka ny fanazavana azo avy amin’ny tomponandraikitry ny Ofisim-pirenena momba ny fanjarian-tsakafo (ONN).
Manana toby PNNC ny fokontany Tsaratanàna, kaominina Vinaninkarena ao Antsirabe II. Niorina ny taona 1999 ny foibe ary misahana zaza 120 eo ho eo. Tanjon’ny asa atao rehetra ao anatiny ny fampihenana ho 50% ny tahan’ny tsy fanjarian-tsakafo mitarazoka eo amin’ny 1 000 andro voalohany iainan’ny zaza. Misokatra indroa isan-kerinandro ny toby ary miovaova araka ny sokajin-taona ny dinidinika ara-pahasalamana omena ny renin-jaza, hoy ny filohan’ny ONG Vero, Ralisoa Alice, mpiara-miasa amin’ny toby ao Tsaratanàna. Miova isam-bolana ny lohahevitra amin’ny dinidinika ary tsapa fa voafehin’ny renin-jaza avokoa. Refesina, lanjaina ny zaza rehetra tonga hikajiana ny fitombony isam-bolana. Ampianarina mahandro ny vokatra ny tany koa ny renim-pianakaviana, ampiarahana amin’ny zavatra hafa mba hiovaova sy maroloko ny sakafo aroso isan’andro. Ny herinandro lasa teo, natoro azy ireo ny fahandroana ny vomanga menamavo atao lasopy miaraka amin’ny patsa.
Atoro ny fomba fanodinana ny vokatra ho azo tehirizina koa ny reny, tsy ho sahirana rehefa hikarakara ny sakafo isan’andro. Mandeha an-tongotra 1 km sy sasany vao tonga eny amin’ny CSB Vinaninkarena ny reny rehefa misy tsy fahasalamana.
47,3% ny tahan’ny tsy fanjarian-tsakafo miseho amin’ny zaza latsaky ny 5 taona araka ny fanadihadiana EnsOMD taona 2012. Tanjona ny hampihena izany ho 33%.